UmThengi iithenda ezinokuThintelwa ngokwentengiso, i-Stunt Airbag, Ipaki yaManzi enokuThengiswa | Uvuyo Luyehla
Umgangatho weentente zesiko elinobungozi obunomngcipheko kunye nepaki yokufikelela kumanzi angenayo- u-Joy Unokuhluthwa.
Ipaki yamanzi engenanzondo
Ipaki yaManzi engahlawulelwayo
I-0.9mm PVC tarpaulin coated vinyl
30 ° 30 m Ubunzima: 1500kg
UYOBONELELWA ngumenzi wobugcisa wepaki yamanzi enokunyuka kwamaxabiso, intente ezinobushushu kunye neebhegi zomoya ezishushu ukususela ngo-2001.
Ezona mveliso zibandakanya islayidi samanzi esinexabiso elifikelelekayo, ipaki yokuhamba emanzini, umoya ovuthuzayo wentente, umngcipheko wezemidlalo, ibhegi yomoya exineneyo, intengiso engabizi, njl.
I-PVC yangaphandle kwe-Dem Camp Camp Cating Hotel Hotestal Crystal ithengisiwe
I-PVC Air Air Air Kidor Pimoor Painking Worton Internatity ithengiswa. I-Bubble ye-Bubble ye-Bubble Cedble ivelisa umgangatho ocacileyo wentente. Intente ecacileyo ye-bubble inezicelo ezininzi ezinjengeenkampu, ihotele, iziganeko zeqela. Singakwazi ukucoca intente yenkampu yenkampu yobungakanani obahlukeneyo, wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi, iintente ezinqamlezileyo ezithengiswayo.
I-BUBBE YO-I-Airlight Fohde down intente ecacileyo yeCawn engaphandle
I-Airline ye-Airline ye-BUBBE ye-BUFBE DOND ye-Ded yeCamp yeCamp. Ulonwabo oluyingozi luvelisa zonke iintlobo ze-airtightightifiting yabathengi kwihlabathi liphela. Ukuba ufuna iintente ezicacileyo zenkampu, zive ukhululekile ukunxibelelana nathi, iintente ezinqamlezileyo ezithengiswayo.
Icawa ecocekileyo ye-Dome Dome Bubble Cabins i-ballon ijalon yentente
I-carical icacile i-Dome Dome Bubble ye-BUBBBLE yeNkunkuma yangaphandle. Ulonwabo lwe-bubble oluhlangeneyo luyathengiswa kakuhle kakhulu kwiimarike zamanye amazwe kwaye luyathandwa ngabathengi abaninzi. Inokusetyenziswa okuninzi, njengentente ye-balloon ye-calloon yeenkampu, i-LAbo enamagqabi, njl. Njl. Wamkelekile ukunxibelelana nathi ukufumana amaxabiso.
Ibhegi yekhephu yekhephu yekhephu
Ingxowa yekhephu yekhephu ye-Phyboard Airbag ye-PAD I-Pid Ingxowa ye-Pid Ingxowa ye-titts + https: //www.joyinflathela.com
Ukucwangciswa: Iimfuno zomthengi onomdla kunye neenkxalabo; Qinisekisa isitayile, umbala, ubungakanani, umsebenzi weemveliso kunye nohlahlo-lwabiwo mali lomthengi; Ngokweemfuno zomthengi kunye nezinto ezixhalabisayo, xoxa ngendlela enokwenzeka okanye uyilo.
Isisombululo: Yenza imizobo emi-3 ixhomekeke kwimfuno yomthengi; Fumana isisombululo kunye nokuphucula; Veza iodolo yokuvelisa ngenqaku elikhethekileyo ngesisombululo.
Imveliso: Ngokomyalelo wokuqulunqwa komzobo wokuzoba kunye nokuvelisa; Landela ishedyuli yemveliso kwaye uthathe iividiyo ezinxulumene nabathengi baqinisekise; Vavanya imveliso kwaye uthathe ividiyo ngexesha lovavanyo.
Emva kokuThengisa / ukuPhendula: Thumela iividiyo ezinxulumene nokunxibelelana nabathengi; Ukuhanjiswa; Hlawula ukubuyela kwimeko yokusebenzisa.
Zonke ezi vidiyo zidutshuliwe xa sivavanya iimveliso ezinobungozi liqela lethu lokudubula, okanye ingxelo yabathengi yethu kwaye yadutshulwa kwindawo. Eyona nto ibonakalisa ubume, ukwakheka, ukusebenza, umbala kunye nokusetyenziswa kweemveliso zethu. Kungoko kufanelekile kuthi ukuphucula….
IGuangzhou Joy inflatable limited ngumzi mveliso okhethekileyo kwipaki enamanzi atshisayo, iintente ezinomngcipheko kunye ne-stunt airbag. Sinokukunika isisombululo esenzelwe indawo yakho. Oku kunokuba yindibaniselwano yemveliso nganye ekufanelayo iiparamitha ezithile, uhlahlo-lwabiwo mali kunye nobungakanani. Ngamava ethu asusela kwiminyaka eli-10 edluleyo kumazwe angama-50, siyazi ukuba zeziphi iisetingi ezenza ukuba kube mnandi ngokwemeko yokusebenza kunye nokusebenza.
Iimveliso zethu zisetyenziswa ngokubanzi kwiindawo zokuzonwabisa, imiboniso, i-adventure, umngeni omkhulu wokusetyenziswa kwangaphakathi nangaphandle, kunye neepaki zamanzi njl, ukuzonwabisa / ukonwaba / imidlalo / iindawo zabakhenkethi njalo njalo. Siyazi, kwindlela eya ngaphambili, kukho amathuba kunye nemiceli mngeni, ukhuphiswano kunye nentsebenziswano. Kodwa siyakholelwa ekubeni ulwazi olutsha kunye neetekhnoloji ziya kudlala indima ebalulekileyo ekuphuhliseni nasekuphuhliseni ulwazi,
Siyaqinisekisa ukuba sinakho ukubonelela ngemveliso efanelekileyo kunye nexabiso elifanelekileyo lokufumana ixabiso, ngokusekwe kubasebenzi abanamava, oomatshini abaqhubele phambili kunye nenkqubo yokulawulwa komgangatho.
Nxibelelana nathi Fumana uyilo lwamahala
Ikhethelwe kwiintente ezinobushushu kunye nokuhamba kwamanzi kwindawo yokugcina amanzi. Sibonelela ngeziqhelo ezahlukeneyo ezinjengombala, ubungakanani, isitayile, uyilo lokubonakala, umsebenzi, ukushicilela, njl. Njl. Nge-SGS, CE, UL kunye nolunye uqinisekiso lobungcali bempahla kunye neemveliso.